Col. Cabdullahi oo Dhaqan Xumo ku Haya Hanaanka Dowlad Wanaaga
Buluugleey, Friday, September 30, 2005
Col. C/laahi Yuusuf Axmed ayaa qoraal uu soo saaray xilka kaga qaaday Gudoomiyaha Bangiga dhexe, iyadoo gudoomiyaha Bangiga dhexe shir jaraa'id uu qabtey ku sheegay xil ka qaadistaasi iney tahay mid aan sharciga raacsaneyn. Warka uu siiyey saxaafada xortaa Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya Dr. Max'uud Maxamed Culusow ayaa waxa uu ku sheegay in ay tahay xil ka qaadista lagu sameeyey mid aan dastuurka raacsaneyn oo sharci darro ah. Wuxuuna qoraalkaas ku tilmaamay mid ku dhisan awood ku tumasho, waxa uuna xusay in uusan dhageysaneyn qoraalada nuucaas ah oo ku saleysan kelitalisnimo, isagoo dadweynaha Soomaaliyeed iyo caalamkuba u cadeeyey inuu wali isagu yahay Gudoomiyaha Banggiga Dhexe ee Soomaaliya.
Wuxuu Dr. Culusow cadeeyey in nidaamkii dib u heshiisiinta burburay kadib markii xukuumadii Kenya lagu soo dhisay ay u kala jabtay garabyo iska soo horjeeda. Waxa uu sheegay xilka Col. C/laahi Yuusuf uu ka qaaday in aysan ansixin xataa garabka golahiisa wasiirada ah oo ay aheyd buu yiri in la soo marsiiyo golaha wasiirada oo dhan iyo baarlamaanka oo la hor keeno sababta keentay xilkaqaadistiisa. Dr. Culusow Wuxuu talo u soo gudbiyey in Col. Cabdullahi iyo garabkiisa Jowhar ku sugan ay u hogaansamaan sharciga lagu heshiiyay iyo waxa uu ugu yeeray hanaanka dowlad wanaagga ah oo aysan dhicin in awooda garab keliya sida uu doono u siticmaalo.
Sidoo kale, wuxuu cambaareeyey waxyaabaha dastuurka aan raacsaneyn ee laablakaca loogu dhaqaaqayo, wuxuuna soo bandhigay in la hareer marayo heshiiskii dib u heshiisiinta ee lagu gaaray wadanka Kenya. Wuxuu gunaanadkii war saxaafadeedka uu ku soo gabagabeeyey In Jowhar ragga jooga oo ay is ku heybta yihiin Col. Cabdullahi sida C/Risaaq Xasan Juriile oo ah u qaabilsanaha xaafiiska Prof. Geedi iyo Maxamed Ameeriko oo labaduba ay halkaasi ka wadaan howshii ay ahayd inuu qabto gudoomiyaha Bangiga Dhexe. Wuxuu Dr. Culusow soo bandhigay tilmaamaha awood urursiga ku dhisan, uuna u sheegay madaxda garabka Jowhar su'aalaha uu ka keenay doorka qaldan oo ay ragaas sida qarsoodida ah ay u qorsheynayaan diyaarinta hanaanka miisaaniyada iyo soo dabacaada lacag Shillin Soomaaliya iyada oo aan la ogeysiinin xildhibaanada, iyo weliba iyadoo aan la raacin sharciyada u degsan adduunka.
Waxaa kale oo uu sheegay in si weyn uu uga hadlay inta murankaan uu soo socdey xisaabaad laga furtey banggiyo shisheeye oo ay sameeyeen qaar ka mid ah Garabka Col. Cabdullahi, waxa uuna sheegay in taasi ay ka hor imaaneyso xeerka banggiga u qaabilsan diwaangelinta xoolaha dadweynaha ee ku jira gacanta dowladda. Waxa uuna marar badan ka codsaday in Col. C/laahi Yuusuf uu joojiyo talaabooyinkaasi balse uu ka dhaga adeygay. Isagoo sheegay in ay xilkiisa muhim ku tahay in la dhowro sharafta lacagta qaranka iyo amaankeeda. Waxa uuna ugu dambeystii sheegay in arrimahaas muranka badan dhaliyey in ay tahay kuwa ugu badan oo abuuray khilaafka u dhaxeeya isaga iyo Col. Cabdullahi .
Banaanbax weyn oo looga soo horjeedo Col. C/laahi Yuusuf iyo taageerayaashiisa garabka Jowhar ayaa maanta ka dhacay magaalada B/weyne
Xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka dhacay Banaanbax weyn oo looga soo horjeedo Col. C/laahi Yuusuf iyo taageerayaashiisa garabka Jowhar. Dadweyne aad u fara badan ayaa maanta isugu soo baxay bartamaha magaalada B/weyne, kuwaasi oo banaanbaxooda ku muujiyay sida ay uga soo horjeedaan xarigii dhowaan loo geeystay Sarkaal lagu magacaabo Cali Shiino oo xabsiga magaalada Jowhar ay ku xireen maamulka Col. Cabdullahi ee ka jira Jowhar, dabadeedna ay si sharaf ka dhaca ugu soo masaafuriyeen magaalada B/weyne.
Dadkaas banaanbaxayey ayaa waxay ka soo horjeedeen xarigii sida sharci darada ahayd loogu geeystay magaalada Jowhar. Sarkaalkaas ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiil tababareysey maleeshiyooyinka ka yimid gobolka Bari kuna jira xerada Kongo ee ku taallo duleedka magaalada Jowhar. Dadweynaha isugu soo baxay mudaharaadka ayaa intooda badan waxay si weyn uga careysnayeen talaabada uu maamulka Max'ed Dheere ka qaaday sarkaalkaas, iyagoo ku eedeyey garabka Jowhar ee Col. Cabdullahi in arrintaasi ay ka aamusatay oo aysan waxba ka qaban.
Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa ka taliya Maxamed Dheere. Jowhar oo xaruun u ah garabka taabacsan Co. Cabdullahi Yusuf hoosyimaadana maamulka Maxamed Dheere ayaa ku dhici waayey iney u abuuraan maamul sharciya oo ka gacan banaan dagaaloogaha xukun marooqsiga ku haysta gobolka Shabeelada Dhexe.
Maamulkaas waxey ceebo badan ay ka soo gaartey heyadaha caalamka, dad badan oo fikrad ahaan raacsan Col. Cabdullahi haddi uusan waxba ka qaban karin xadgudubyada ka soo gufaacanaya maamulka Shabeelada Dhexe. Waa maxay macnaha ay sameyn karto digdigta uu ku hayo dagaaloogayaasha Muqdisho? Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kala daadanaya macno darrada ay ku heshiiyeen garabka dowlada KMG ee ku sugan magaalada Jowhar oo awoodoodii oo dhan ay hoos tagtay dagaaloogaha ka taliya gobolka Shabeellada Dhexe.
Dadka Soomaaliyeed waxaa maalinba maalinta ka dambeysa u soo iftiimaya dhagarta ay ku heshiiyeen garabka Col. Cabdullahi Yusuf ee xaruuntoodu tahay degmada Jowhar oo caadeystey ku tumashada xuquuqda dadka Soomaaliyeed iyo hayadaha caalamka ee u qaabilsan gargaarka ee xurmada mudan. Kuwa ku sugan magaalda Jowhar oo markii horey mooday ubaxa uu Col. Cabdullahi dhidibada u aasayo mid dhab ah, balse ay maana ogaadeen in uu yahay mid ku dhisan dhagar iyo khiyaamo lagu hagardaminayo jiritaanka umadda Soomaaliyeed.